Pirimeerliigii Ingliizii Lakkoofsaan: Maan Siitii, Joose Moorinihoo, Seyaad Kolaasinaach, Joorjiyoo Waayinaaldam - BBC News Afaan Oromoo
Pirimeerliigii Ingliizii Lakkoofsaan: Maan Siitii, Joose Moorinihoo, Seyaad Kolaasinaach, Joorjiyoo Waayinaaldam
Goodayyaa suuraa Siitiin kilaboota kaan qabxii shaniin caale mataa kilaboota pirimeerliigii ta'e jira
Pirimeerliigii Ingliizii bara Kanaan Maanchistar Siitiin jalqabbii ajaa'ibaa agarsiisaa jira. Joose Moorinihoon kan leenji'u Maanchistar Yunaayitid isa bara Aleex Farguusanitti deebi'aa kan jiru fakkaata.
Taphoota pirimeerliigii gaafa Sambataa irratti mudate lakkoofsaan agarsiisan 10 akka armaan gaditti ibsamu:
Sanbata darbe West Biroomich Albiyoon dirreen ala morkatee galchii 3 fi 2'n kan mo'ate Maanchistar Siitiin yeroo kamuu caalaa jalqabbii bareedaa taasiseera. Maan Siitiin taphoota kudhanin qabxiiwwan 28 kan argate yoo ta'u taphat sagal keessaa sagal mo'atee tokko qixa yeroo bahu ida'ama galchii 29 qaba.
Jarri Maan Siitii dorgomiiwwan kubbaa miilaa garaagaraan taphoota 21 taphatanii gonkumaa hin mo'atamne. Kunis seenaa kilabichaa keessatti isa jalqabaati.
Gareen Peep Gaardiyoolaa Maan Siitiin taphoota pirimeerliigii Ingliizii saddeet dhiyeenya taphateen galchiiwwan 32 yeroo galchu 5 qofatu irratti lakkaawame.
Totanhaamin galchii 1-0'n gaafa Sambataa kan injifate Maanchistar Yunaayitid erga bara 2007/2008 booda yeroo jalqabaaf bara kana taphoota shanan jalqabaa dirree isaa irratti taphatanin galchiin tokkollee irratti hin lakka'amne.
Taphataan sarara ittisaa Shaalkaa irraa jijjiirraa tolaan gara Arsenaal kan dhufe Seyaad Kolaasinaach taphataa Arsenaal kamiyyuu caalaa galchiwwan kilabichi bara kana galmeesise keessaa harka qaba. Hanga ammaattis galchiiwwan sadi ofiif galchee ala galchiiwwan sadiif akka galan tumseera.
Taphoota pirimeerliigii Ingliizii bara kanaan kilabiin gara galchii morkataatti rukuttaawwan gadi-aanaa rukute Iswaansiidha. Rukkuttaawwan 76 gara galchiitti kan rukutan yoo ta'u kallattiin gara galchiiti kan rukutaman 20 qofa.
Liigiiwwan Awurooppaa gurguddoo shanan (Liigii Ingliiz, Laaligaa, Bundasliigaa, kan Xaaliyaanii fi Faransaay ) keessaa kilaboonni afur Kiriistaal Paalaas, Beniveentoo, Maalaagaa fi Dizhoon kilaboota taphoota bara kana taphatan mara irratti galchii itti galaa turedha. Tapha tokkollee osoo itti hin seenin hin xumurre.
Jifataan kilaba West Haam Haaviyeer Hernaandez galchii pirimeerliigii 41ffaa isaa yeroo kilabin isaa qixa bahe lakkoofsise. Galchiiwwan taphataa kanaa hundinuu saanduqa rukkuttaa adabbii xumuraa keessaa rukutaman. Isaan alatti sanduuqa keessaa kubbaa rukkutuun galchii baay'ee kan galmeesise utubaa Evartan kan ture Tim Kaahil yoo ta'u galchiiwwan 56 galchee ture.
Utubaan Liivarpuul Joorjiyoo Waayinaaldam galchiiwwan pirimeerliigii lakkoofsise 18'n gaheera. Galchiiwwan hundinuu, 11 kilabasaa duraanii Niwkaastiliif yeroo taphatu fi 7 immoo Liivarpuulif yeroo taphatu galche. Galchiiwwan hammanaa immoo dirree ofiirratti kan galche yoo ta'u taphataan kaan seenaa kana isa qooddatu hin jiru.
Sanbata darbe Istook Siitiin galchii 1-0'n kan injifatame Waatford torbee dura Chelsiidhaan 4-2'n mo'atamuu isaatiin dorgommii bara kanaan yeroo jalqabaaf walitti aansuun taphoota lama injifatameera.
Torbe kana Yunaayitid fi Totanhaam wal morkatu. Eenyu irra-aana?